ISEMTHETHWENI IINGCEBISO I-INTANETHI
I-radio ezithile zomthetho imiba okanye iingxaki asingawo rare nowadays, kwaye ukusukela imfundo entsimini, umthetho sele bavuke, kuphela echanekileyo isigqibo ngendlela kunzima imeko ingaba recourse ukuba i-experienced lawyer. Ilifa, eyenziweyo, imisebenzi, wokuqhawula umtshato — zonke ezi kwiimeko kufuna ukuba wena musa personal a lawyer, njengoko ubuncinane, umntu isemthethweni clarification.
Nangona kunjalo, bale mihla inyathelo nje ubomi ngamanye amaxesha lenza ukwenzeka ukuba ukunikezela ixesha ndwendwela i-ofisi a lawyer. A uxakekile ishedyuli, rhoqo kwaye ixesha elide ishishini trips, ethabatha care osapho, indlu chores ayikwazi kubekwa ngaphandle. Kwaye ngenene, isemthethweni icebiso kukuba engathndwayo ukuthatha ngaphantsi yure okanye ababini ixesha Lakho, kwaye akuvumelekanga ukuba lincinane kuba uxakeke umntu. Kodwa kukho isisombululo.
Isemthethweni ingcebiso-intanethi oninika ithuba ukuze ufumane oluneenkcukacha zomthetho ulwazi malunga nawuphi umba nangaliphi na ixesha convenient Kuwe, ehleli e-hlola ikhusi. A umntu lawyer okanye lamagqwetha ayiyi kuphela anike-intanethi ingcebiso kwi umbuzo Ufuna wabuza, kodwa uza kuqhuba inkqubo kwi-ubunzulu uhlalutyo neenkqubo zomthetho kunye namanye amaxwebhu iya kuba eluncedo ekwenzeni kuyimfuneko amabango, iingxelo, kwaye ibongoza.